Wonkhe umcashi ufuna ukubona e abasebenzi bakhe isimo ezihlakaniphile kuphela, kanzima-working, onokwethenjelwa futhi phambili abantu. ukusebenza ngempumelelo kwezinhlelo zokuxhasa izinhlobo ezahlukene imisebenzi edinga amakhono hhayi kuphela ethize, kodwa futhi izimfanelo siqu okhethekile. Nokho, ukuze ufunde kabanzi mayelana nembangi okuthunyelwe singenamuntu njengoba ukwaziswa okuningi udinga abantu bambuke bemangele isikhathi eside. Kuze kube yimanje, Wabasaqalayo setha zobunzima izinkathi. Nokho, yize umqashi icala wokukhungatheka e abasebenzi naye ngithi goodbye ngemva ndaba ezinyangeni ezimbalwa, abaphathi kakhulu ufuna ukudala abasebenzi esitalini abasebenzi tekuchkoj omncane. abaphathi Abaningi emigomweni efanele futhi kuphumelele kubasebenzi babe arsenal yabo kwezikhali ezifana ngokwengqondo zokwenza umsebenzi. Cabanga, ukuthi yini umnyombo walokho okushiwo Imininingwane bayokusiza yembulani ngokuvuthwa ikhandidethi futhi amafomu lapho zikhona.
Ukuze uqale ukucacisa izifiso abalimi mayelana nokubunjwa kwabasebenzi babo, futhi kuchazwa, ukunquma ukuthi yiziphi izimfanelo basebenzisa amasu ngokwengqondo ukuqasha. Okokuqala, kuba Yiqiniso, kwekhono lomuntu oyedwa, imisebenzi yakhe professional ukuhambisana. Naphezu kweqiniso lokuthi ukuze bahlanganyele izikhundla ezithile kuba phambi ngokuphelele kwama-diploma imfundo efanele, abaqashi bafuna ukwazi ezingeni intelligence, kanye kungenzeka yokusebenzisa izisekelo ezicatshangelwayo zezinkolelo-imisebenzi.
Okwesibili, kubalulekile ilungelo izici siqu izicelo. Lezi zihlanganisa izimfanelo ezifana ukukhuthala, ukugcina isikhathi, emakhonweni okukhulumisana, ukucindezeleka ukubekezelelana, ukuzinikela, rationality, ukwethembeka kanye ngezilokotho. Ngakho, umqashi, usebenzisa uhlobo ngokwengqondo amasu e nokuqashwa, lembula kokubili izimfanelo nokomuntu siqu abasebenzi bakho abanamandla.
Ukuze uthole ukwazi ikhandidethi sikhundla, zisebenzisa izindlela ezihlukahlukene. Literacy ukunxenxa abakhuluma ngokukhethekile kwakhiwa iminyango noma izikhungo. Amathekhiniki eziyisisekelo Izishoshovu ezisebenza ezihlukahlukene imibuzo, ukuhlola, kuhlinzekelwe ukudlula izicelo, ingxoxo. Kuyadingeka ukuba sicabangele ngokuningiliziwe ngamunye wabo.
Kancane mayelana inhlolovo
Kukhona imibuzo eminingi lapho kulabo abazobhapathizwa ukuba baphendule bebodwa. Ngokuvamile, iphrofayli uhlu esimisiwe imibuzo mayelana nezici eziyinhloko wesicelo. Lezi zihlanganisa usuku nendawo umuntu azalelwa yesisebenzi ezingaba, imfundo yakhe, noma isimo sengqondo ukubuthelwa empini, ikheli, inombolo yocingo contact, isimo somshado, ubuzwe. • Umfundzisi angabuta umbuto kuyinto wokutakula izisebenzi ngoba inkonzo ngenxa lula yayo ukusetshenziswa futhi ukuphelela kolwazi wathola. Nokho, le mibuzo engenhla hhayi kuphela umqashi ufisa ukucela abafundela sikhala.
imibuzo Personal mayelana neziqu professional
Ulwazi on the imfundo wathola ngumfakisicelo, kanye neminye imininingwane ephathelene nezinga kwekhono ibe umsebenzi, elisungulwe kwasekuqaleni. Uma ngabe umhlolwa akusho babe nolwazi oludingekayo, futhi kwezinye izimo, isipiliyoni esifanele-ke, naphezu kwawo, mhlawumbe, amakhono oluvelele kwezenhlalo, umqashi akanandaba ukusebenza nonjalo. Ukuze sikwazi ukuhlola ukuhambisana professional ngabanye zemisebenzi kunombolo lwemibuzo ebekiwe imibuzo.
Okokuqala, umqashi ikuthande ukufunda ngezinto imfundo wathola ngumfakisicelo. Imibuzo ukuthi zikhona cishe zonke izinhlangano, imibuzo ephathelene indawo, isikhathi nesimo ukuqeqeshwa, igama okukhethekile, iziqu indaba ephathwayo, degrees zezemfundo izihloko, imfundo eyengeziwe, ulwazi ngezilimi zakwamanye amazwe.
Okwesibili, kubalulekile kutfola isipiliyoni ikhandidethi. Ukuze uthole ulwazi aludingayo ngokulandela imibuzo wabonisa izinkathi umsebenzi, izikhundla, yemfanelo, umholo, izizathu kokushiya enkampanini. Izimpendulo leli banga imibuzo ukwenza kucace kumqashi, kangaki futhi ngasiphi isizathu abantu bashiye indawo odlule umsebenzi, imisebenzi ukuthi azifani asinikwe.
Okwesithathu, umqashi ngokuqinisekile nentshisekelo abantu okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi legkoobuchaemyh, okuvame kangaka lemibuzo kuhlanganisiwe imibuzo ezimayelana nokutholakala kwe-hhayi kuphela amakhono ewumngcingo-Iphrofayela, kodwa futhi nezinye amakhono. Lezi zihlanganisa, isibonelo, izinga ubunikazi PC nezinye izinto zasemahhovisi, khona izincwadi zokushayela.
Siza imibuzo ekwabeni izimfanelo ngokwengqondo
Ukuze ikhandidethi kwindawo ekuqaleni kwazo inkampani uye wazakhela imicabango yabantu okuphelele futhi ezihlukahlukene, zinikwa nezindaba ngokwengqondo kwemisebenzi imibuzo. Lezi ukukhathazeka, okokuqala, ugqozi kanye nemivuzo okuyinto iqhutshwa umuntu ngedivayisi enhlanganweni ethile. Yini kahle hle ukuthonywa kukhethwa indoda: iqembu omuhle noma isithunzi inkampani, ezingeni yokukhokha umsebenzi, kungenzeka iSilekeleli Sokwazisa, Kutfola lwati noma umsebenzi amathemba amasha, ukuzinza, ukusondela ukuba indawo yokuhlala? Imiphi imigomo izisethile nembangi eminyakeni embalwa ezayo? Konke lokhu kwaziswa ngokuqinisekile baziswa ngumqashi.
Okwesibili, ngokwengqondo iphrofayeala umsebenzi iqukethe eziningi imibuzo mayelana intshiseko encintisana. Uma uthi nhlá, umqashi efuna ukwazi ukuthi abantu bakhetha ukuchitha isikhathi sabo mahhala, kubonakala kuyisimanga. Nokho, impendulo yalo mbuzo icacisa umsebenzi ngamunye, ukukhula kwawo esibanzi, ukoma ukuphila futhi ikhono uphumule.
Okwesithathu, amasu ngokwengqondo ngoba umsebenzi enzelwe ukuhlonza ulwazi lomuntu ukuzethemba. Okwamanje akukho emehlweni into engavamile e lemibuzo, sicela ukhombise izici yakho umhlabeleli futhi embi kunazo yezimfanelo zawo eziyisisekelo ubuntu. Izimpendulo yonke le mibuzo bese nakanjani zenani umqondisi.
Izinzuzo nezingozi inhlolovo
• Umfundzisi angabuta umbuto kuyinto inqubo ezivame kakhulu esetshenziswa abaqashi ukuhlola nge abangase basebenze. Sinemibandela zako ngendlela elula, ikhono ucacise in isicelo amasethi olungafani izinkinga, isivinini, lula ukusetshenziswa, kanye ukuphelela ulwazi yayo. Nokho, zikhona nemiphumela ethile engathandeki sina lendlela. Ngokwesibonelo, uma ugcwalisa lemibuzo ukuze ikhandidethi elula ukukhohlisa lowo ongaba umqashi wami, ethi ulwazi kuphela omuhle mayelana imvelaphi yabo, nokuthi umqashi efuna ukubona. Ngaphezu kwalokho, ukuhlanganisa uhlu lwemibuzo - it unesibopho. Ukuze uthole ukwaziswa okuphelele mayelana izicelo futhi agweme ukubaphathisa incazelo double kwezimpendulo abazobhapathizwa 'zale mibuzo, yezinkampani kufanele zikhange ukuhlanganisa amaphrofayli anhlobonhlobo ochwepheshe - abameli, odokotela bengqondo nezokuhlalisana kwabantu.
ukuhlolwa kwengqondo ngoba umsebenzi
Izimpendulo zemibuzo eziqukethwe lwemibuzo, umuntu ngamabomu unika. Lokhu kusho ukuthi ukuthembeka Imininingwane ayikwazi kuchazwe ngokuthi eliphelele, ngoba kukhona njalo ithuba bahlobise mayelana nesimo sezindaba kweqiniso. Ngakho-ke, ukuze uthole impendulo ukhetho elivumelekile, amafemu ukusebenzisa ukuhlolwa kwengqondo lapho befaka isicelo somsebenzi. Umuntu wenza umsebenzi wabo ngokungazi, futhi ngenxa yalokho, kungaba imiphumela esichazwa njengesono elihambisana ngokoqobo. Ngaphezu ukuhlolwa kwengqondo futhi ingasetshenziswa ukuze unqume ukuthi ezingeni intelligence futhi ukuhlola izimfanelo zochwepheshe umuntu.
Namuhla, i-evame kakhulu ukunikeza candidates for izikhala ukwenza imisebenzi izobonisa degree of ukuthuthukiswa ukucabanga okunengqondo futhi kwendawo, ikhono ukukhumbula izinto ezimbalwa ngesikhathi esifanayo, ikhono ukuqhathanisa bese uzindla selimazi. I kunazo owaziwa futhi esibhalwe kahle yilona test IQ, okwakubekelwa iyawakha Eysenck. Umphumela walolu hlobo lokungabaza imisebenzi wayeyonikeza impendulo eminingi lo kwalabo abatholako ikhandidethi, ikakhulukazi uma kuqhathaniswa imibuzo, lapho khona isihloko esichaza yedwa.
Ukuhlola ukuthi ukubona ubuntu
Akukhona nje ezingeni intelligence ngokuhlukumeza okunamandla umsebenzi, abaqashi bafuna ukwazi. It siyasetshenziswa njengamanje, futhi ukuhlolwa kwengqondo lapho befaka isicelo somsebenzi. Abamele abasebenzi masevisi anikela izicelo ukuhlangabezana imisebenzi ethile disparate lapho impendulo efanele ngomqondo yendabuko akuyona. Kulokhu, izihloko abazi lutho, ukuze iphesenti ukukhwabanisa sincane kakhulu. Nazi ezinye izibonelo ukuhlolwa kwengqondo lapho befaka isicelo somsebenzi.
Eyokuqala yalezi - kwencazelo umbala ozithandayo. abaqashwa ninikeza enwetshiwe 8 amakhadi anombala ukuze kusuka umbala emnandi kunazo kuya neponravilos kakhulu. Ukuze baphumelele isivivinyo ngokwengqondo lapho befaka isicelo somsebenzi kahle ithandiwe futhi ikhanda lenkampani, kubalulekile ukwazi okushiwo lesi silingo. Lapha imibala ukumela izidingo ezithile umuntu. Ngokuvamile, obomvu - kuyinto umsebenzi, ukoma kwabantu senzo. Ikhadi eliphuzi kufanekisela ukuzimisela nethemba. Green kubonisa izidingo iSilekeleli Sokwazisa. Blue efana njalo futhi ngokuvamile kuhlobene kubantu. Mpunga uchaza isimo sokukhathala nokulangazelela ukuphumula. umbala Purple ekhadini kubonisa isifiso ukuze ubalekele ukubhekana namaqiniso. Brown elifanekisela isifiso bative bavikelekile. Ekugcineni, i-choice ikhadi black kubonisa khona lowo ofake isicelo ehlaselwe ukucindezeleka. Yiqiniso, ngemibala emine yokuqala kukhona inani elihle kunawo, futhi ngenxa yalokho kukhona ekuqaleni.
Isibonelo sesibili yokuvivinywa - udonsela. On ephepheni izicelo Umenyiwe ziveza indlu (izidingo uphawu ukuphepha), abantu (degree of Ukuthandwa bazikhohlwe) kanye nokhuni (okuyingxenye yokuphila komuntu amandla). Kufanele kukhunjulwe ukuthi izakhi nekudvweba tintfo letimbili ukuba ezilinganiselwe. Ungakhohlwa mayelana lemisuka ukwakheka njengoba indlela eya endlini (ukuxhumana), izimpande kwesihlahla (uxhumano ezingokomoya nabantu, ithimba), izithelo (usizo).
Emihle nemibi ukuhlolwa
Izinzuzo inqubo ekunqumeni ubuntu, kanye ephrofeshinali futhi esincintisana kuyinto ukumangala, kumnandi, kungenzeka ukuthola imiphumela lesifanele. Kodwa akubona bonke ngakho elula. Khumbula ukuthi ukudlula imiphumela yokuhlolwa ezinjalo kungathonya indlela umuntu azizwa ngayo. Ngaphezu kwalokho, ngamunye ehlukile ihlola izakhi engokoqobo. Ngokwesibonelo, i-umbala omnyama kubonisa ngempela ukucindezeleka, nokuba sithole enye into - ku ubuhle, zesimanjemanje kanye ngesibindi.
inkhulumoluhlolo kwenqondo lapho befaka isicelo somsebenzi
Ukuthintana ngqo ekhanda nesisebenzi ezingaba futhi kuyisinyathelo esibalulekile ekuhloleni ubuntu ikhandidethi kulesi sikhundla. Phakathi interview ungacela hlandla imibuzo ukuhlola amakhono olimi lohlolwako, ukuzithiba kwakhe, ukuzethemba, kanye ukuphendula. Ngo inqubo yokuxhumana ingatholakala ulwazi mayelana kokubili izici siqu futhi professional yabasebenzi ezingaba khona.
Jobe Interview: Izinzuzo nezingozi nebubi
Yiqiniso, le ndlela sizohlangana ikhandidethi isikhundla sokuba abaqashi umphefumulo, ngoba ngaleyo ndlela bakwati kuhlatiya ngalokujulile hhayi kuphela izimfanelo engaphakathi kumuntu, kodwa futhi ukubonakala kwakhe. Ngeshwa, kukhona eziningi ngaphandle kwekutsatsa luhlangotsi, ngoba ngokuvamile abaphathi zinezikhathi eyeqisayo mayelana umsebenzi enhle, bese umqashi uma ukubukeka ikhandidethi engakaze esikalini, akafuni ukwazi izimfanelo zayo zangaphakathi.
Umthelela angaphezu ukunxenxa
amasu ngokomqondo ngaphezu esigabeni sokuqala ukuxhumana abaqashi nezisebenzi elisetshenziswa inqubo umsebenzi ngokuhlanganyela. Ngaphezu kwalokho, ukuzisebenzisa abaphathi hhayi kuphela, kodwa futhi nezinye izigaba abasebenzi emisebenzini babo bomsebenzi. Ngokwesibonelo, kukhona amasu ngokwengqondo ahlukahlukene ukusebenza nezingane. Ingane akuyona njalo thembeka kubazali babo nothisha, ngakho kwesinye isikhathi kungasebenza ukusungula izizathu ukuziphatha kwakhe okuhle, ukuhlolwa noma imibuzo ehlukahlukene. Abaqashi, esikhundleni salokho, futhi usebenzise amasu ngokwengqondo ngokusebenzisana kahle. Njengoba kufakazelwa ahlukahlukene survey, kubantu nasembulungeni ukusebenza umsebenzi wabo kwayithinta indlela okukhuthaza nakakhulu futhi basekelane, kodwa engazange amsole kusukela iziphathimandla.
Ukuvuvukala Ngemva omama: izimbangela, izimpawu kanye nokwelashwa
"EPAM 1000": yokusetshenziswa. Kusukela lokho kusiza "EPAM 1000"?